Lavabit: "Haddii FBI ay guuleysato, shirkadaha waxay ka carari karaan Mareykanka" | Wararka IPhone
Hadday tahay FBI wuxuu ku guuleystaa garaaca wadnaha uu hada ku hayo Apple, dadka isticmaala waxay waayi doonaan asturnaantayada kahor sharciga ciidamada iyo, waxa ka sii daran, kahor jabsadayaasha. Tani waa wax Apple, sida shirkado kale oo badan, aysan u arkin wax wanaagsan oo ay ku dhiirrigelin karto taas shirkadaha muhiimka ah ee dalka qaarkood waxay u carari doonaan gobol kale halkaas oo ay ku sii wadi karaan inay soo saaraan barnaamijyo ammaan ah. Taasi waa waxa uu qoray Lavabit, oo hore u ahaan jiray shirkad amni.
Musharaxa madaxweynenimada Donald Trump ma qariyo rabitaankiisa ah in Apple ay lashaqeyso xoogaga sharciga oo xitaa wuu balan qaaday (in kastoo aan shaki ka qabo inuu fulin karo balanqaadkiisii) in Apple ay soo saari doonto qalabkiisa gudaha Mareykanka hadii loo doorto madaxweyne. Haddii astaamaha ugu xun la fuliyo, sida laga soo xigtay Lavabit, shirkaduhu waxay sameyn doonaan isla wixii ay sameeyeen Edward Snowden, Julian Assange, Kim Dotcom ama websaydhka Torrents The Pirate Bay ayaa sameeyay: hel hoy ay u oggolaato kula shaqee xorriyad buuxda.
FBI-da ayaa aakhirka dhaawici doonta Mareykanka
Warbixinta kooban ee la soo bandhigay, ayuu Lavabit ku sheegay in FBI-da ay isku dayday inay hesho furaha sirta gaarka ah shirkadiisa kahor inta aysan xirmin, wax dhacay sanadkii 2013 dartiis daadinta Edward Snowden. Furahaani waa inuu «dhexda, go'aanka, kormeerka iyo wax ka beddelka (si ula kac ah iyo si shil ahba) dhammaan xiriirada ka dhexeeya Lavabit iyo adduunka ka baxsan»Oo aan caddeeyo in«Dawladdu waxay hadda ka dooneysaa [isla] kaalmada aan caadiga ahayn shirkadda Apple, taas oo jabisay ujeeddada dhammaan qoraalada oo si aan loo baahneyn u waxyeelleyneysa hantida aqooneed ee shirkad gaar loo leeyahay oo aan ku lug lahayn, sinnaba, dembiga baaritaanka ku socda.«.
Lavabit ayaa aaminsan taas Codsiga dawladu waa sharci daro, laakiin intaas keliya maahan. Wuxuu kaloo aaminsan yahay inay dhaawici karto sumcadda Apple, maadaama dadka isticmaala aysan waligood hubin karin haddii cusbooneysiinta aan ku rakibeyno qalab basaasnimo cusub. Sida haddii aysan taasi ku filnayn oo laga yaabo inay tahay qodobka ugu muhiimsan ee ay faahfaahinayso Lavabit, shirkadaha bixiya aaladaha isticmaala nooc ka mid ah sirta ayaa ka carari kara waddanka.
Habkani wuxuu sababi karaa in ganacsiyado badani u wareejiyaan hawlahooda xeebta si ay ugu adkaato sharci fulinta inay helaan wax caawimaad ah.
Xaqiiqdii, shirkadaha sida Silent Circle, ProtonMail ama Tutanota ayaa uga tagay Mareykanka siyaasadooda asturnaanta. Waxaan u maleynayaa inay ku adag tahay Apple inuu ka baxo wadankii uu ku qaaday talaabooyinkiisii ​​ugu horeeyay, laakiin wax walba waa macquul. The ammaanka iyo asturnaanta Kuwani waa laba ka mid ah sababaha aan u iibsanno aaladooda, haddii ay joojiyaanna u fidinta, waxaan raadsan karnaa waxyaabo kale, sidaa darteed shirkadda uu hoggaamiyo Tim Cook waxay arki laheyd in macaashkoodu hoos u dhaco. Aniga aragtidayda, dawladu waxay kudhamaandoontaa is dhiibida. Haddii kale, waxaa laga yaabaa inaan aragno sida Apple ugu guuro Australia, yaa og.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » dhowr » Lavabit: "Haddii FBI-du guuleysato, shirkadaha waxay ka carari karaan Mareykanka"